Ny rindranasa Fox Now dia tsy misy intsony amin'ny Apple TV | Avy amin'ny mac aho
Apple TV ny taranaka fahatelo Tsy hanana ilay rindranasa Fox Now intsony. Tsy izy no voalohany ary matahotra izahay fa tsy izy no ho farany. Amin'ity taona ity fotsiny, ny fampiharana YouTube, CBS All Access, ary MLB dia nanala ny fampiharana azy ireo tamin'ity maodely Apple TV ity.
Araka ny tsikaritr'i Appleosophy, Fox now dia nanambara tamin'ny volana Mey fa tsy hanohana intsony ny Apple TV an'ny taranaka fahatelo. tapaky ny volana Jona. Tonga ny andro ary tsy tohanana intsony ilay rindranasa, fa nesorina ihany koa tamin'ny efijery an-trano Apple TV. Mampahatsiahy anao izahay fa ity rindranasan'ny Fox ity, ny mpampiasa dia afaka mijery ny atin'ny fantsona mivantana sy ilain'ny fangatahana, ao anatin'izany ny fandaharana amin'ny fahitalavitra, lalao ara-panatanjahantena, vaovao farany, sarimiaina ary maro hafa. Amin'izao fotoana izao, ny fampiharana dia mitaky iOS 12 na taty aoriana na tvOS 13 na taty aoriana, izay midika fa ny maodely Apple TV andiany fahefatra na vaovao ihany no mifanaraka amin'ny fampiharana.
Ho an'ireo izay mbola manana Apple TV faha-XNUMX Gen ary tsy mikasa ny hanavao, misy hatrany ny vahaolana. Ny atiny AirPlay dia azo alefa avy amin'ny iPhone na iPad mankany amin'ny boaty ambony, izay midika fa mbola afaka mijery atiny FOX ANAO na stream hafa tadiavinao ianao. Raha te hahita ny Paramount +, ohatra, izay tsy misy amin'ny Apple TV an'ny taranaka fahatelo, azonao atao ny misoratra anarana amin'ilay fantsona ao amin'ny app TV amin'ny iPhone-nao ary avy eo mahita azy amin'ny app TV amin'ny Apple TV taloha.
Lojika fa tsy mifanaraka amin'ity modely Apple TV ity intsony ireo rindranasa mihevitra fa manana azy io eny an-tsena isika hatramin'izay 9 taona lasa. Efa an-taonany maro izao raha tsy manohy matoky an'ity fitaovana ity ireo mpamatsy fampiharana, indrindra rehefa manana ny zafindohalika manana ny fahafahany feno isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Ny fampiharana Fox Now dia tsy misy intsony amin'ny Apple TV an'ny taranaka fahatelo